बाह्रबिसे नगरपालिकाको प्रशासनलाई पत्र ‘ठेकेदारले टेरेनन्, बर्खा लाग्यो, पुल र सडक कहिले बन्छ ? – मिलिजुली खबर
बाह्रबिसे नगरपालिकाको प्रशासनलाई पत्र ‘ठेकेदारले टेरेनन्, बर्खा लाग्यो, पुल र सडक कहिले बन्छ ?
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रबिसे नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेर आफ्नो क्षेत्रमा ठेकेदार कम्पनी र सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले पुल र सडक निर्माणमा लापर्बाही गरेको जनाएको छ । नगरप्रमुख निमफुञ्जो शेर्पाले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय चौतारीलाई दुई आयोजनाको छुट्टा छुट्टै पत्र लेख्दै तत्काल काम अघि बढाउने वातावरण बनाईदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
नगरप्रमुख शेर्पाले नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ र ४ जोड्ने अरनिको राजमार्गमा साँदीखोल्साको पुल निर्माणमा ठेकेदारले लापर्बाही गरेको बताउनुभएको छ । साँदीखोल्साको पुल २०७५ सालमा आएको बाढीले बगाएको थियो ।
साँदीखोल्साको पुल सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोट मार्फत टेण्डर भई लामा कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको हो । तर काम निकै सुस्त भएको भन्दै नगरपालिकाले काम छिटो सकाउन आफुले गरेको ताकेता ठेकेदारले नमानेको जनाएको छ । ठेकेदार र सडक डिभिजन कार्यालयका ईन्जिनियरको मिलेमत्तोमा निर्धारित समयमा काम नसकिएको भन्दै साँदीखोल्सामा पुल नबन्दा बाढी आएर क्ष ति पुर्याउन थालिसकेको बताईएको छ । नगरपालिकाले प्रशासनलाई साँधिखोल्सामा पुल नबन्दा बाह्रबिसेको मुख्य बजारलाई असर पर्ने र अहिले चीनबाट आयात भईरहेको स्वास्थ्य सामग्री ढुवानीमा समेत निकै समस्या भएकाले तत्काल ठेकेदार कम्पनी र सडक डिभिजन कार्यालयका ईन्जिनियरलाई बोलाएर बाढीले खोल्सा आसपासका घरमा पुर्याएको क्ष ति तत्काल दिन लगाई, निर्माणको काम अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
त्यसै गरी बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नम्बर ३ कै खुर्सानीबारीमा अरनिको राजमार्ग निर्माणको काम समेत निकै सुस्त भएको पाईएको छ । खुर्सानीबारी क्षेत्र भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले चीन पुग्ने सडक बगाएको थियो । उक्त सडक निर्माणका लागि पनि सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोट मार्फत टेण्डर भएर मैना चुली यू. एण्ड एस भोटसिपा जे.भी प्रा.लि ले ठेक्का पाएका थिए । तर यो काम पनि सन्तोषजनक नभएको भन्दै नगरपालिकाले प्रशासन गु हारेको छ ।
अघिल्लो पटक भोटेकोशीले कटान गरेको क्षेत्र अहिलेसम्म बनि नसकेको छैन । अहिले कोशीमा पानीको सतह बढीसकेको छ। कटान गरेको क्षेत्र समयमै ठेकेदारले नबनाईदिँदा खुर्सानी बजारको जो खिम नटरेको नगरप्रमुख शेर्पाले बताउनुभयो । चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन पनि उस्तै सकस छ ।
पाँचखालको शिखरपुरमा आग लागी हुँदा घर गोठ ज लेर नष्ट